सुरज मानन्धर | गृहपृष्ठ
Home यातायात सुरज मानन्धर
बिजनेश हेड, एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेज प्रालि
यामाहाका मोटरसाइकल ‘फन्नी’ र ‘एक्सक्ल्युसिभ’ छन्
नेपालमा यामाहा मोटरसाइकलको बजार अवस्था कस्तो छ ?
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को तुलनामा गत आवमा व्यवसाय केही घटे पनि बजार हिस्सा भने बढाउन सफल भएका छौं । हामीले प्रिमियम सेग्मेण्टअन्तर्गत नेपाली बजारमा भिœयाएको आर फिप्टिन, एफजेएस र एसजेडआरको विक्री बढ्दो छ । यामाहा आफैमा अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्ड भएकाले पनि नेपालमा यसको बजार राम्रो छ । यामाहा मोटरसाइकललाई राइडरहरूले उत्कृष्ट ब्राण्डका रूपमा छनोट गरिसकेका छन् । हामी सधैं ग्राहकहरूको सन्तुष्टिमा विश्वास राख्ने कम्पनी भएकाले पनि यामाहा ब्राण्डप्रति ग्राहकहरूको विश्वास छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले विभिन्न मोडलका स्कूटीबाहेक ८४ हजार मोटरसाइकल विक्री गरिसकेका छौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी विक्री हुने पनि यामाहाको मोटरसाइकल नै हो । समग्रमा यामाहा ब्राण्डको मोटरसाइकलको बजार राम्रो छ ।
अहिले नेपाली बजारमा यामाहाका कुनकुन सेग्मेण्टका मोटरसाइकल उपलब्ध छन् ?
बजारमा अहिले चारओटा सेग्मेण्टअन्तर्गतका मोटरसाइकल उपलब्ध छन् । तीमध्ये इकोनोमी सेग्मेण्टअन्तर्गतका वाईबीआर (११० र १२५ सीसी) र इण्टाइसर गत आर्थिक वर्षमा अत्यधिक विक्री हुन सफल मोटरसाइकल हुन् । पावर एण्ड स्टाइल सेग्मेण्टअन्तर्गत एसएस १२५ र इण्टाइसर रहेको छ । यामाहा कम्पनीको चीनमा उत्पादित एलवाईएम ११० सीसीका स्टेप थ्रो स्कूटी पनि उपलब्ध छन् । यामाहाका उत्पादन अति बलिया मोटरसाइकलका रूपमा परिचित छन् । मर्मत खर्च कम र माइलेज सेग्मेण्टअन्तर्गत पनि यो उत्पादन पर्छ । प्रिमियम सेग्मेण्टअन्तर्गत एसजेडआर, एफजेडएस, आर फिप्टिन र सुपर बाइकअन्तर्गत आर सिक्स, एक्सजेडसिक्स रहेका छन् । यी सबै मोटरसाइकलमध्ये ‘आर फिप्टिन’ युवापुस्तामाझ ‘हटकेक’का रूपमा परिचित छ । उच्चस्तरीय टेक्नोलोजीका कारण पनि आर फिप्टिनमा युवापुस्ताको आकर्षण बढ्दो छ ।
यामाहा मोटरसाइकलको विशेषता के हो ?
यामाहाले उत्पादन गरेका मोटरसाइकलहरू आकार र इन्धन क्षमतामा ठूलासाना भए पनि एउटै सिष्टमबाट बनेका छन् । यसका सबै उत्पादनमा यामाहाको डीएनए ट्रान्सफर भएको छ भन्दा पनि हुन्छ । युवाहरूमाझ रेसिङ बाइक भन्नासाथ दिमागमा आर१५ नै आउँछ । यो धेरै स्पीड हुँदा पनि सजिलै कण्ट्रोल गर्न सकिने भएकाले सुरक्षित छ । तुलनात्मक रूपमा आर फिप्टिन ‘युनिक’ छ । त्यस्तै एफजेएसमा नेपालमै कुनै मोटरसाइकलमा प्रयोग नभएको रेडिएर टायर प्रयोग भएको छ, जुन तुलनात्मक रूपमा मोटो र फराकिलो छ । सेण्ट्रल मास सिष्टम भएकाले बाइकको र राइडरको भारलाई यसले सजिलै कण्ट्रोल गर्छ । साथै, यसको फ्युल ट्याङ्कीमा पनि कभरको व्यवस्था छ । सीट लामो एवम् फराकिलो भएकाले बच्चासहित सजिलै तीनजनाले यात्रा गर्न सक्छन् । यसमा प्रयोग भएको टेक्नोलोजीका कारण पनि यी मोटरसाइकल ‘फन्नी’ र ‘एक्साइटिङ’ र ‘एक्सक्ल्युसिभ’ छन् ।
कम्पनीका योजना केके छन् ?
हाल युवालाई लक्षित गरेर हरेक कलेजमा गएर सेफ्टी राइडिङबारे प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले ट्राफिकसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । हालसम्म ह्वाइटहाउस, कालीमाटी इञ्जिनीयरिङ, क्वेष्टलगायत नौओटा कलेजमा प्रशिक्षण दिइसकेका छौं । त्यस्तै कम्पनीले एसजेडआर टेष्ट राइडमा उपहारको व्यवस्था पनि गरेको छ । यसमा जोकेहीले भाग लिन सक्नेछन् । एसजेडआर टेष्ट राइडका विजेताका लागि प्रथम पुरस्कार रू. ५० हजार, दोस्रो पुरस्कार रू. ३० हजार र तेस्रो पुरस्कार रू. २० हजार रहेको छ । यसबाहेक ग्राहकको सन्तुष्टिका लागि नेपालभर रहेका शोरूम तथा डिलरहरूबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । साथै, निकट भविष्यमै यामाहाको अर्को स्कूटी पनि भित्र्याउने योजनामा छौं ।
नेपालको अटोक्षेत्रका समस्याहरू केके हुन् ?
खासगरी अहिले फाइनान्सिङको समस्या छ । फाइनान्स कम्पनीहरूले डाउन पेमेण्ट ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म कायम गरेका कारण कतिपयले मोटरसाइकल चढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि किन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेण्टको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसो गर्दा मोटरसाइकल सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न सक्छ । यसो गर्ने हो भने मोटरसाइकल विक्रीदर बढ्छ भने फाइनान्सलाई पनि फाइदा हुन्छ ।